Members » မန္တလေးဂဇက်အဖွဲ့ဝင်များဆုံစည်းပွဲ နှင့် မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆုပေးပွဲ	202
Yin Nyine Nway says: 20 ရက်နေ့က bar Camp 2013 ရဲ့ ဒုတိယနေ့
Swal Taw Ywet says: အလွယ်ဆုံးနည်းလေးပြောမယ်နော်။
ကိုရင်စည်သူ says: အူးစည်လည်း ၂၀ ရက်နေ့ ဘောဘောပေါ်မှာ
ဒီတခါတော့ ၂ခုထဲက ဘာကိုရွေးရမလဲတိတော့ဖူး ဂျာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 886
Yin Nyine Nway says: အူးအူး …. ဘောဘော ပေါ်မှာ အမှိုက်ရှင်းတာပဲ အူးအုးရယ်
မိုချို says: ကွန်မန့် တွေဖတ်ပြီး တကယ့် ကို ၀မ်းသာအူမြူး ဖြစ်ရတယ်။ ကိုယ့် ကိုယ် ကို လည်း မလာ နိုင်လို့ အသည်းတွေ ယား နေမိ တယ်။ အိမ်က လူကြီး က တရုတ် နှစ်ကူး ပြီး မှ ခွင့် ယူ လို့ ရ မှာ ။ သားတော် မောင်နဲ့ ၂ ယောက်ထဲလည်း လေယာဉ်ပျံ စီးဖို့ အဆင် မပြေ။ ဒီနှစ်မှ ပဲ နှစ်ကူး ကလည်း နောက်ကျ ၊ ခါတိုင်း နှစ်တွေ ဇန်န၀ါရီ ၂၀ လောက်ဆို နှစ်ကူးပြီးပြီ။
ဦး ကျောက်ခဲ says: မမိုချို
kai says: ဒီပိုစ့်မှာ တက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကွန်မင့်လေးနဲ့ စာရင်းပေးပါခင်ဗျား….
နောက်ပြီး.. တကယ်ပြောတာ..မဟုတ်ဖူးဆိုတာ.. မဟုတ်တဲ့အကြောင်း.. ပွဲအတွက်.. နိုင်ငံတကာကနေ လာသူတွေ့သူများလည်းရှိနေတာမို့.. ဒီပွဲဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတန်းအဆင့်လို့.. သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါကြောင်း..ရယ်..။
MaMa says: ကော်မန့်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်.. ဖုံးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်.. အီးမေးလ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်.. တိတိကျကျလေး.. အကြောင်းကြားကြစေချင်ပါတယ်..။ နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ဖို့ တက်ရောက်နိုင် မတက်ရောက်နိုင်ကို တရားဝင် အသိပေးအကြောင်းကြားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားအောင် ဒီပွဲကနေ စ ပြီး ပျိုးထောင်ယူမယ်ဆိုရင် ကောင်းမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 821
marblecommet says: အန်တီမမ
Khaing Khaing says: သူကြီးတို့ကတော့ လုပ်ပီ …. ပေါ်မလာရင် လျှော်ကြစေချင်ကြောင်း ဆိုတော့ ပေါ်လာပီး ဆုမဲမပေါက်တာတို့ဆိုရင် သူကြီးက တာဝန်ယူပြီးပေးမှာလား …. လောကကြီးမှာ လူဆိုတာ ဒီနေ့နဲ့မနက်ဖြန်တူဘူးလေ …. သများက အဲနေ့ကလေးမွေးသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မတုန်း ……
kai says: ခွင့်လွှတ်ရမှာပေါ့…
ကလေးနာမယ်သာ..”တော်နေရတနာပုံ”လို့ပေးလိုက်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 236
Green Rose says: ဟုတ်ကဲ့
Green Rose လည်းတက်ရောက်ပါမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပို့ပါတယ်ရှင့် ၊ စကားမစပ်.. သူကြီးရေ..လာမယ်ပြောပြီးမလာဖြစ်ရင်. လျှော်ရမှာလား. .. လျော်ရမှာလား. လေးစားလျှက်
ခင်ခ says: ၁၆.၁.၂၀၁၃ နေ့ကျရင် တက်ရောက်မယ့်သူစာရင်းကို ရွာထဲကြေငြာပေးရင်း ကွန်ဖမ်းလုပ်ပေး ရင်ကောင်းလေ မလား တွေးမိတာလေးပါ။
Ma Ei says: ဆုရသူများကို လက်ခုတ်တီးအားပေးဘို့
nozomi says: ခရီးဝေး ရောက်နေမှာမို့ ခွင့်တိုင်ပါသည် ခင်ဗျာ
Mr. MarGa says: နတ်ပြည်သမ္မတရုံး
အရီး လေး says: ကျွန်မကတော့ ဂေဇက် စာဖတ်သူ အနေနဲ့အဟောင်းပါ
အရီးခင်လတ် says: အရီးလေး ရေ
aye.kk says: အခြေအနေရ
ဦးဦးပါလေရာ says: ဟဲ့ … ကောင်လေးတွေနော်….
ဦးဦးပါလေရာ says: အဟမ်း….
မင်းနန္ဓာ says: ဦးပါရေ
moonpoem says: လာမယ် ဦးဦးပါလေရာရေ ရောက်အောင်လာခဲ့မယ်။ ဒီတစ်ခါ လွဲလို့ မဖြစ်ဘူးနော်
အရီး လေး says: တွေ့ဆုံပွဲကိုတော့မလာဖြစ်ပါ
ဦးဦးပါလေရာ says: ကိုမင်းနန္ဓာ နှင့်တကွ ရွာသူားများခင်ဗျား…
မင်းနန္ဓာ says: ပရိုက်ဗေစီ နဲ့ ထရန်စပေရန်စီ ပေါ့ ဒီလိုလုပ်မယ်ဗျာ P3့ က ပွဲလုပ်မယ့်နေရာမှာ (smoking/ Non Smoking area ခွဲသလို) ခွဲထားလိုက်ရင် မကောင်းဘူးလား..
kai says: မှတ်တမ်းထားတဲ့အနေနဲ့.. ဂရုဖိုတိုရိုက်စေချင်ပြီး.. အဲဒီပုံကို.. ယူအက်စ်မှာထုတ်တဲ့.. မန္တလေးဂဇက်ပုံနှိပ်သတင်းစာထဲ ထည့်မှာပါ..
ပါတဲ့ပုံက.. သတင်းစာထဲ.. ၄လက်မလောက်အရွယ်မို့.. ကိုယ့်ပုံကိုယ်တောင်…. မနည်းကြည့်ရမယ်ထင်ပါတယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3552
ဦးဦးပါလေရာ says: Group Photo က ရိုက်ကို ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်…
Was this answer helpful?LikeDislike 526
ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် says: ဒီလိူလုပ်ရင်မကောင်းဘူးလားဗျို့ http://mandalaygazette.com/164317/creative-writing
Was this answer helpful?LikeDislike 1870
nature says: ဒီပိုစ့်ကို မန်ဘာတွေသာဖတ်လို့ရအောင်လုပ်ထားရင် ဂန္ဓာရီဆြာအုပ်ရေးတဲ့ပိုစ့်ကိုလည်း မန်ဘာတွေပဲဖတ်လို့ရအောင်လုပ်သင့်တယ်။ ဂန္ဓာရီဆြာအုပ်ရေးတဲ့အဲဒီပိုစ့်မှာ အနည်းငယ်ဖြည့်စွက်ချင်တယ်။ တင့်ကားကုန်းဘက်က ၀င်ရင် ကရ၀ိတ်အ၀င်ဂိတ်ကိုကျော်ရင် L9လမ်းဆုံတခုကိုတွေ့မယ် ။အဲဒီလမ်းဆုံရဲ့ ဘယ်လက်အခြမ်းမှာ p3 ဆိုင်ရှိတယ်။ မြေပုံမှာအဲဒီလမ်းဆုံမပါဘူးဖြစ်နေတယ်။ L9 နဲ့ R9 ဟာလမ်း ၃ခွဆုံဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာ p3 ရှိတယ်။၀င်ကြေးတယောက် ၃၀၀ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။
weiwei says: ကျွန်မ စာရင်းမပေးရသေးဘူးလားမသိဘူး … မမှတ်မိတော့လို့ အချိန်မှီ စာရင်းအမြန်လာပေးလိုက်ပါတယ် … လာမယ်နော် ….
padonmar says: ဟင် ..ည ၁၁ နာရီကျော်သွားပြီ၊
padonmar says: တစ်ချို့ မန်ဘာတွေ ဓာတ်ပုံနဲ့ ပါမှာစိုးပြီး မတက်ကြတာတွေရှိမှာစိုးလို့ တစ်ခုရှင်းပြချင်ပါတယ်။
koyinmaung says: ပျော်ရွင်စရာကောင်းမဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုမလာနိုင်တဲ့အတွက်…
manawphyulay says: စိတ်မကောင်းလိုက်တာ.. ရက်လွန်မှဖတ်မိတော့ စာရင်းပိတ်သွားပြီပေါ့နော်…. အားလုံးရဲ့အပြုံးလေးတွေကိုတော့ မြင်ချင်မိသား…..
ရွာသူ jujuma . says: မမကလဲ လူရင်းကြီးတွေကို အဲလိုမလုပ်ရဘူးလေ …
minnannawar says: စာရင်းမပေးမိပေမဲ့ အဲဒီနေ့မှ စိတ်ကူးပေါက်ပြီး လာရင်ကောရလား။
အရီးခင်လတ် says: minnannawar
ဒီ မှတ်ချက်ကို မတွေ့လို့ ဟိုဘက်မှာ ကြပ်ထားတယ်။ မသေချာလဲ ၅၀/၅၀ မျိုးဆိုရင် စာရင်းပေးထားသင့်တယ် ထင်ပါတယ် မင်းနန်နဝါ ရေ။
Foreign Resident says: manawphyulay ကော ၊
ကထူးဆန်း says: . အခု လက်ရှိ မန်းဂဇက်မှာ အပုဒ်ရေ အများဆုံး တင်ထား သူ နဲ့ ကွန်မန့် အများဆုံးပေးထားသူ နှစ်ယောက်ကိုလည်း အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပေးဖို့ ရှိပါတယ် ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: လက်ဆောင်အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါ၏။
moonpoem says: ကိုရွှေတိုက်စိုးထံ အလျင်အမြန် သတင်းပို့ ပြီးပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
aung moethu says: ကျတော် မောင်အောင်မိုးသူ တက်ရောက်ပါ့မယ်ခင်ဗျာ ဆုယူရမှာဆိုတော့း)
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဆုပေးပွဲ လာချင်လိုက်တာ။ ဒီပွဲအရေးကြီးတယ်လို့ သိနေတယ်ရှင်။ အွန်လိုင်းမီဒီယာဟာ ပရင့်မီဒီယာလိုပဲ တကယ်လေးနက်တယ်လို့ ပြသတဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်နေပြီနော်။ ရွှေအမြုတေ ဆုပေးပွဲကျင်းပသလိုမျိုး အခုလည်း မန်းဂေဇက်က စလုပ်ပြီဆိုတော့ တကယ့်ပွဲပဲ။ ဂျာနယ်တွေထဲ ပါအောင် ဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲ မသိဘူး။ ပရဟိတ အဖွဲ့ပါဖွဲ့ထားနိုင်တော့ မန်းဂေဇက်ဟာ တကယ်အားကောင်းနေပါပြီ။
စောဦး says: အခမ်းအနား အစီအစဉ်မှာ..
veryloveman says: အသိနောက်ကျလေခြင်း